जो कोहीले P3D लागि राम्रो मौसम addon थाहा?
प्रश्न जो कोहीले P3D लागि राम्रो मौसम addon थाहा?
2 वर्ष5महिना पहिले #17 by andhar
जो कोहीले Prepar3D लागि राम्रो मौसम addon के हो थाहा ??
2 वर्ष4महिना पहिले #82 by Gh0stRider203
म P3D छ, तर मेरो सिस्टम यो मन जस्तो छैन .....
एउटा कुरा म साँच्चै राम्रो फेला गर्नुभएको छ, र हरेक प्रतिशत मूल्य, REX छ।
म यसलाई प्रयोग कहिल्यै गर्नुभएको गर्दा, म FSRealWX बारेमा राम्रो कुरा सुनेको छु। (र यो जो पाठ्यक्रम म रुचि, मुक्त)
दुवै उपयुक्त P3D छन्
मलाई आशा छ यो मद्दत गर्छ!
2 वर्ष2महिना पहिले #509 by flightas1
FSrealWX राम्रो काम गर्दछ।